Isu takaedza base yekuchaja yeChoetec Apple Watch | Ndinobva mac
Zvirokwazvo vazhinji vevashandisi veApple Watch vane kana vari kutsvaga cheji yekuchaja yeApple smartwatch. Ichokwadi ndechekuti mumusika wezvino zvishandiso tinowana yakanaka yakati wandei uye Apple pachayo ine yayo yega yekuchaja base pawebhusaiti yepamutemo, asi isu tinogona zvakare kuwana dzimwe nzira dzakasiyana. Mune ino kesi, hwaro hwatinahwo hweiyi diki ongororo Apple MFI yakasimbiswa kuti kunyangwe chiri chechokwadi chiri nezve wachi uye kwete iyo iPhone, tinogona kuva nechokwadi chekuti hatitenge hwaro hunogona kukanganisa mudziyo wedu. Uye zvakare, Choetech ine yakanaka katarogu yezvishandiso zveApple zvishandiso uye mazhinji acho anozivikanwa nekambani.
Mushure memavhiki akati wandei ekushandisa iyi yekuchaja base, ndinogona kutaura kuti ichi chigadzirwa chakanaka kune vese avo vari kutsvaga chivako cheApple Watch icho chinosanganisira tambo loading. Iyo inosanganisirwa tambo ingangoita mita imwe kureba.
1 Dhizaini uye zvekuvaka
Dhizaini uye zvekuvaka
Pasina kupokana, dhizaini yeyiyi inoshanda chaizvo uye hainyepedze kumira yakanyanya nekubatana zvakakwana newachi, chero iyo modhi. Ruvara ruripo isirivheri uye isu tinogona kukomberedza chikamu cheiyo base tichiisiya pa37º kushandisa iyo "padivi pemubhedha tafura" maitiro yeApple Watch zvakakwana. Tinogona zvakare kuisiya zvachose yakati sandara pa90º uye kanganwa nezvehusiku modhiyo. Iyi inzira inonakidza yekupa iyo Choetech kuchaja base mamwe mashandiro. Izvo zviyero uye huremu hwesi iyi yekuchaja Iwo ari: 105 x 75 x 74 mm uye huremu i165.9g.
Pazvinhu zvekuvaka iri Yakakwira kuramba sirivheri epurasitiki iyo inopa kureruka uye kusimba kune iyo yese. Iyo inowedzerawo mamwe mapuru erabha pachikamu icho chatinoisa wachi iyo inotibatira isu kune 38 mm kana 42 mm saizi, pasina dambudziko uye ichadzivirira zvingangoita kukwenya. Muchikamu chezasi chechigadziko rabha inowedzerwa kuitira kuti irege kutsvedza zvachose patafura.
Iyi yekuchaja base inonakidza kune vese vashandisi vasingade dhizaini yepakutanga Apple base kana avo vanonyatsoda kuve neimwe nzira pamba inosanganisira iyo yekuchaja tambo yeiyo wachi ine magineti base inoenderana zvizere neApple mawachi. Mutengo wacho ingangove iyo yakaipa poindi yandinopa kuChoetech yekuchaja base nekuti kune chimwe chinhu isu tine chigadzirwa chepamutemo, asi kana ndikazviona izvo mu Amazon kunze kweEurope Ine mutengo unoderedzwa wakadzikiswa izvozvi, ngatione kana zvasvika pano ...
CHOETECH charger yeApple Watch
Wedzera tambo yekuchaja
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Isu takaedza base yekuchaja yeChoetec Apple Watch